Igumbi labucala kufutshane nePalembang Square, iPalembang Icon
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguShirley
Onke amagumbi ayilwe kwingcinga encinci enefenitshala epheleleyo. Ngokuphathelele i-fasilities, unokufumana i-AC, i-WiFi, iCable yeTV, ibhedi yobukhulu bokumkani, idesksi kunye nesitulo, amanzi amaminerali kwigumbi ngalinye. Kwigumbi lokuhlambela labucala, izinto zangasese ezithandekayo ziyafumaneka ukuze uthuthuzeleke.
I-Amelia kost ibonelela ngendawo yangoku enezixhobo ezipheleleyo kunye neenkonzo. Abasebenzi basehotele baya kukunceda ngeenkonzo ezahlukeneyo ezifana nenkonzo yegumbi, i-concierge, indawo yokuhlamba impahla, ukuvuka kunye nenkonzo yokucoca.
Ihotele yethu ibonelele ngekhitshi elincinci (umgangatho wokuqala) ukuze iindwendwe zipheke into kwaye zibonelele nesixhobo sokuhambisa amanzi kumgangatho ngamnye.
Ibekwe kwindawo entle kumbindi wesixeko, i-Amelia Kost ibonelela ngendawo epholileyo yokuphumla. Ngelixa uhlala kule hotele, ungandwendwela ibhongo lasePalembang, i-Ampera Bridge, eyimizuzu nje eli-15 uqhuba usuka ehotele. Okwangoku, i-Sultan Mahmud Badaruddin II Airport yimizuzu engama-20 yokuqhuba ukusuka ehotele. Zimbalwa iivenkile ezinkulu ezikufutshane njengePalembang Square nje ikhilomitha enye ukusuka ehotele kunye nePalembang Icon 1,3 km ukusuka ehotele.
Ngolwazi oluthe vetshe, ungaqhagamshelana nathi ku-(62)711-374660
Iilwimi: 中文 (简体), English, Bahasa Indonesia
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Ilir Barat I